नबोजित सिंह विजेपी विरुद्ध आक्रमक, कांग्रेसले माग्यो सिद्धुको सुरक्षा| Nepal Pati
नबोजित सिंह विजेपी विरुद्ध आक्रमक, कांग्रेसले माग्यो सिद्धुको सुरक्षा
छत्तिसगढ । भारतीय राज्य छत्तिसगढको निर्वाचनमा स्टार प्रचारक पञ्जाब क्याविनेट मन्त्री एवं कांग्रेस नेता सिद्धुले केन्द्र सरकार र मोदी विरुद्ध निसाना साधेंका छन् । चुनाव प्रचारको दौरान छत्तिसगढमा मन्त्री सिद्धुले मेदी सरकारलाई लुटेरा समेत भन्न भ्याए ।
सरकारले लागु गरेको नोटबन्दी प्रति अत्यन्त कडा प्रतिक्रिया दिदै‌ भने, के चिया बेच्ने मनिस चाेर हो ? श्रीमानको केही पैसा लुकाएर राख्ने महिला चोर हो ? सामान्य मानिस कसरी कालो धन राख्न सक्छन् ? कसले कालो पैसा सुन बनाएर रियल स्टेट वा बैंकमा राख्छन् ? कसले कालो पैसा घरमा राख्छ ?
सरकारले ५०० र हजार नोटबन्दी गर्दै २ हजारको सुरु गर्यो । यिनीहरु ब्ल्याक मनीलाई पर्पल गर्न चाहान्छन् । केवल एक अडानी एक लाख कराेड रुपैंयाका नेता हुन् । नीरव मोदी, विजय माल्या र मेहुल चौकसीको पैसा ल्याउनुको सट्टा सर्वसाधरणको पैसा सरकारले लियो । विजेपी अध्यक्ष अमित शाह प्रति फायर खोल्दै भने, उनको अहमदावादमा एक बैंक छ । जसको बार्षिक कारोबार १३ करोड रुपैंया छैन तर ७३५ करोड रुपैयाँ जम्मा गरिएको छ । २२ हजार ५ सय करोड ब्ल्याक मनी पर्पल बनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री मोदी विरुद्ध उनले भने, उनी झुट्टा मानिस हुन् । लुटेरासँग उभिएका छन् । विदेशमा भएको ९० करोड ल्याउँछु भन्थे । उल्टो देशको पैसा विदेश पुर्याए । नेता सिद्धुको कडा प्रतिक्रिया पछि कांग्रेसले उनी माथि जीवनको खतरा देख्दै केन्द्रिय सरकारसँग सुरक्षाको माग गरेका छन् ।